ESI AGBAGHARI IYI - ESI MEE - 2019
Rehashing nke iyi na BitTorrent mmemme
Mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ na ị kwụsịrị nbudata site na iyi, ruo oge ụfọdụ, ụfọdụ n'ime ọdịnaya ebudatara nwere ike iwepụ ya na draịvụ ike kọmputa, ma ọ bụ faịlụ ọhụrụ nwere ike ịgbakwunye na nkesa. N'okwu a, mgbe ịmalitegharia nbudata nke ọdịnaya, onye ahịa ga-ebute njehie. Kedu ihe ị ga-eme? Ịkwesịrị ịlele faịlụ iyi ahụ dị na kọmputa gị, na nke a na-etinye na tracker, maka njirimara, ma ọ bụrụ na nkwarụ na-ewetara ha na kọwaa ọnụ. A na-akpọ usoro a iweghachi. Ka anyị kọwaa usoro a site na ntinye site n'iji ihe atụ nke ịrụ ọrụ na usoro a na-ewu ewu maka ibudata iyi BitTorrent.
Na usoro BitTorrent, anyị na-ahụ nbudata nsogbu, nke na-enweghị ike imezue n'ụzọ ziri ezi. Iji dozie nsogbu a, ka anyị megharịa faịlụ.
Site na ịpị bọtịnụ òké aka ekpe na aha nke nbudata, anyị na-akpọ menu ihe dị na mpaghara ma họrọ ihe "Chegharịa ihe a".
Usoro nwughari onu na-amalite.
Mgbe o mechachara, anyị na-amaliteghachi iyi ahụ.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, nbudata ugbu a na-aga n'ihu n'ọnọdụ nkịtị.
Site n'ụzọ, ịnwere ike ịchekwa mmiri iyi egwu, ma maka nke a, ị ga-ebu ụzọ kwụsịrị ibudata ya.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, usoro nke iyi egwu na-agba ọsọ dị mfe, ma ọtụtụ ndị ọrụ, n'amaghị ama algọridim, ụjọ mgbe ha na-ahụ arịrịọ site na usoro ihe omume ahụ iji gbanwee faịlụ ahụ.